लकडाउनमा मनको स्याहार कसरी गर्ने ? – Sudarshan Khabar
लकडाउनमा मनको स्याहार कसरी गर्ने ?
कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस भनेर नेपालमा पनि लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दी गरिएकोछ। रोगको महामारीहुँदा शारिरिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने त हुने नै भयो। साथै मानसिक स्बास्थ्य समस्याको जोखिम पनि बढेर जान्छ। शरीर र मन एक अर्काका परिपुरक हुन । शरिरमा समस्या आउदा मनमा पनि असर पर्छ।
साथै मनमा समस्या आउदा शरिरिक लक्षणहरु पनि देखिन सक्छन। लकडाउनको समयमा सेल्फ क्वारेन्टाइन वा सेल्फ आईसोलेसनमा बस्दा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि बिशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । अन्यथा आफ्नो मनको स्याहार सुसारमा ख्याल नपुर्याउदा मनोसामाजिक समस्या वा मनोरोगको जोखिम बढछ ।
को‍नोनाको प्रकोप जस्ता घटनाहरुले स्वभावैले मानिसको मनमा चोट पुर्‍याउछ। मनमा असरहरु देखिन थाल्छन। यसलाई असहज अबस्थामा देखिने स्बभाबिक प्रतिक्रियाको रुपमा लिईन्छ ।
धेरैको लागि यस्ता असरहरु अस्थाई हुन्छ । समय बित्दै गएपछि ढिलो चाड‍ो प्राय धेरै जसो मानसिहरु आफै पुर्ब अबस्थामा फर्कन सक्छन् । केहिलाइ भने पुर्बअबस्थामा फर्कन गार्हो पनि पर्न सक्छ । बिज्ञको सहयोग पनि चाहिन सक्छ ।
बिपतिको बेला कतिपय मानिसले संयमिता गुमाउन पनि सक्छन। उनिहरुले समस्यासँग जुझ्न गलत उपाय वा तरिका अपनाइ रहेका हुन पनि सक्छन् । नचाहदा नचाहदै नकारात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका हुनसक्छन् । बिपतिमा सबैले आफुलाई समाल्न सक्छन् भन्ने पनि हुदैन। उनिहरुलाई सहयोगको जरुरत पर्दछ ।
बिपतिको बेला ब्यक्तिको मनमा देखा पर्ने त्रास , भय, छटपटि, मानसिक अशान्ति , नैरस्यता र यसको कारण आउन सक्ने व्यवहारजन्य गडबडीलाई ब्यबस्थापन गर्ने दिईने सबै प्रकारका ब्यबहारिक र भावनात्मक सहयोग नै प्राथमिक मनोबैज्ञानिक सहयोग हो ।
प्राथमिक मनोबैज्ञानिक सहयोग पाउदा ब्यक्तिको मनमा शान्ति , स्थिरता आउँछ । तनाब ब्यबस्थापन गर्न सहयोग मिल्छ । दैनिक जीवनमा पर्किन सजिलो हुन्छ ।